डा. अनुप सुवेदी, सरुवा रोग विशेषज्ञ
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) २१० देशमा फैलिसकेको छ । अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या १६ लाख नाघेको छ भने मृतकको संख्या झण्डै १ लाख पुगिसकेको छ । कोरोनाको संक्रमण केही जनावरमा पनि पुष्टि भएसँगै यसले थप चुनौति बढाएको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारको तर्क छ । तर, संक्रमणको केन्द्रविन्दू चीनको छिमेकी देश भएर पनि नेपालमा भने अहिलेसम्म ९ जनामा मात्रै संक्रमण भएको छ । भारतमा पनि संक्रमण बढ्दैछ । नेपाल कोरोनाको डरबाट कत्तिको भयभित हुनुपर्ने अवस्थामा छ त ? साझापोष्टले सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीसँग कुराकानी गरेको छः
डाक्टर अनुप सुवेदी
नेपालमा कोरोना भाईरस (कोभिड १९) बाट अहिलेसम्म ९ जनामा संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । गएको शनिबारयता भएका परीक्षणमा नयाँ संक्रमण देखिएको छैन । थप फैलन नदिन के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ?
हाम्रो समाजमा संक्रमण फैलिएको छ कि छैन सबैभन्दा पहिले त्यो पत्ता लगाउनुपर्‍यो । त्यसका लागि परीक्षणलाई अलि व्यापक बनाउनुपर्छ । सुरुका दिनमा केही ढिलाइ भएपनि पछिल्लो समयमा सरकारले पनि केही सक्रियता बढाएको देखिन्छ । समुदायमा कसैलाई खोकी लागेको र ज्वरो आएको छ भने उनीहरुलाई तत्काल परीक्षण गर्नुपर्छ ।
विदेशबाट आएका मान्छेहरुमा अलि धेरै संक्रमणको सम्भावना हुन्छ । संक्रमित व्यक्तिहरु पनि १ जनाबाहेक अरु सबै विदेशबाट आएका नै छन् । कसरी सावधानी अपनाउने ?
विदेशबाट नेपाल आउनेहरु आजभन्दा १४ दिन अघि नै आएका हुन् । केही दिनअघिको जस्तो त्यति धेरै डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । उनीहरुलाई ज्वरो आउने र खोकी लागेको छैन भने संक्रमण भएको भए पनि निको भैसक्यो । तर, उनीहरुबाट अरुमा सरेको हुन सक्ने भएकोले समुदायमा उनीहरुसँगको सम्पर्कमा रहेका मानिसहरु चाहिँ अलि धेरै सजग हुनुपर्छ । त्यसैले उनीहरु बस्ने समाजमै गएर परीक्षणलाई अलि धेरै प्राथमिकता दिनुपर्‍यो । त्यति गरियो भने हाम्रो अवस्था के हो थाहा हुन्छ । परीक्षणका क्रममा कसैलाई पोजेटिभ देखियो भने बिरामीलाई तत्काल आइसोलेट गरिहाल्नुपर्छ ।
लकडाउनको समय पनि २ हप्ता नाघिसक्यो, विदेशबाट आउनेहरु पनि १४ दिन कटिसके, अब पहिलेजस्तो जोखिम छैन भन्ने हो ?
त्यसरी पनि नभनौँ । जोखिम त छ नै, तर त्यति धेरै आत्तिहाल्ने अवस्था चाँही छैन भनेको हो । अझै केही दिन हामीले जे जस्तो उपायहरु अवलम्बन गरिरहेका छौँ, त्यो अवलम्वन गर्न नछाडौँ । जुन दिन नेपालमा संक्रमित नै छैन या भनौँ, पोजेटिभ देखिएकाहरु पनि निको भयो भन्ने दिन आउँछ, त्यो दिनदेखि चाँही लकडाउन हटाउनेदेखि अरु कुरामा सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ होला । बिरामीको संख्या घट्न थालेपछि मात्रै लकडाउनहरु खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ । अहिले नै हतार गर्नु अलि हतार हुन्छ ।
यतिका दिनसम्म आइपुग्दा झण्डै ३ हजार जनाको हाराहारीमा मात्रै कोरोनाको नमूना परीक्षण भएको छ । यो कत्तिको पर्याप्त छ ?
आजभन्दा १ हप्ताअघि काम नै केही हुन सकेको थिएन । अहिले चाहिँ सरकार पनि अलि तात्तिन थालेको देखिन्छ । अहिले अलिक तदारुकता देखाउन थालिएको छ, यो राम्रो कुरा हो । तर, यतिले मात्रै पुग्दैन । परीक्षण देशभर नै तत्काल पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । केही निश्चित जिल्लाका निश्चित ठाउँमा मात्रै परीक्षण भैरहेको छ । काठमाडौंमै पनि व्यवपक रुपमा भैरहेको छैन । जबकी ठूला शहरहरुमा फैलन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । विशेषगरी पर्यटकहरुको आगमन भैरहने ठाउँहरु भएको हिसावले त्यसलाई अझै धेरै व्यापक बनाउन जरुरी छ । पछिल्लो २/४ दिनको गतिविधि सकारात्मक देखिन्छ तर, यतिले पुग्दैन ।
केही देशमा कोरोनाको संक्रमण जनावरमा पनि देखियो । अमेरिकामा चिडियाखानाको बाघमा पुष्टि भयो । बिरालोसँग पनि धेरै लसपस नगर्न विशेषज्ञको सल्लाह छ । मानिसबाट जनावरमा या जनावरबाट मानिसमा सर्ने सम्भावना कत्तिको हुन्छ ?
अरु जनावरमा अलिलेसम्म सम्भावना छैन । विरालो लगायत केही जनावरमा मात्रै यस्तो देखिएको हो । घरभित्र जनावर पालेर सुम्सुम्याएर बस्ने चलन नेपाली समाजमा छैन । त्यो फुर्सद पनि हामीलाई हुँदैन । त्यसैले नेपाली समाजमा जनावरबाट मान्छेमा संक्रमण सर्ने त्यस्तो सम्भावना छैन । घरघरमा बिरालो छ भने पनि हामी त्यसलाई सुम्सुम्याएर बस्दैनौँ । बीबीसी लगायतमा जे आयो त्यही पत्याइहाल्नुपर्ने होईन । नेपालमा जनावरमार्फत कोरोनाको संक्रमण फैलँदैन । विरालो मार्फत नेपालमा संक्रमण सर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।
चीनको एउटा प्रान्तमा पैसाबाट संक्रमण सर्ने भन्दै नोटहरु जलाउने काम समेत भयो । नेपालमा पनि संक्रमण बढ्ने खतरा छ भन्दै विद्युतीय मार्ग प्रयोग गर्न भनिँदैछ । नेपालमा त्यो सम्भावना कत्तिको छ ?
नेपालमा त्यसको सम्भावना एकदमै कम छ । सबैजनाले आआफ्नो हिसावले सावधानी अपनाएकै छन् । एक हिसावले नेपाली रुपैयाँ अरु देशसँग कारोबार पनि कम हुन्छ । नेपाली नोट नेपालभित्रै कारोबार हुने र संक्रमित पनि कम भएकोले नोटबाट पनि संक्रमण सर्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ ।
अनि बाहिरबाट ल्याइएको सामग्रीबाट ?
नेपालमा त्यो पनि एकदमै कम छ । व्यवहारिक रुपमा बाहिरबाट ल्याएको सामानले बिरामी हुने लगायतका कुराहरु एकदमै कम छ । तर, जे जस्ता सामग्रीहरु ल्याइएको र छोइएको छ, साबुनपानीले हात भने धुनुपर्छ । सामान्य सावधानी अपनाए पुग्छ । संक्रमित कोही व्यक्तिले त्यो सामान छोएको छ भने अरुलाई पनि सर्ने हो । नेपालमा त्यस्तो भयावह अवस्था नभएको हुनाले आत्तिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन । रोग सर्छ भनेर सामान नै छुन नहुने भन्ने छैन ।
यदि शरीरमा संक्रमण भित्रिएको छ भने कत्ति समयसम्म बस्छ ?
शरीरमा लक्षण नै देखियो अर्थात रोगले नै समात्यो भने चाँही २ देखि ४ हप्ताभन्दा बढी समय पनि रहन सक्छ । कत्ति मान्छेलाई त संक्रमण भएको रहेछ भने पनि लक्षण नै देखिँदैन । केही मान्छेलाई सामान्य लक्षण मात्रै देखिन सक्छ । त्यस्ता मान्छेको शरीरमा प्रवेश गरेको २ हप्तामा संक्रमण हराउँछ । जस्तै विदेशबाट आएका मान्छेलाई २ हप्तासम्म पनि कुनै लक्षण देखिएन भने कोही व्यक्ति पनि डराउनु पर्दैन । उनीहरुबाट अरुमा सर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ ।
कोरोना भाइरस विशेषगरी २ हप्तासम्म सर्ने क्षमता राख्छ । नेपालमा लकडाउन भएको पनि झण्डै ३ हप्ता हुनै लाग्यो । लकडाउनलाई अलि खुकुलो बनाउन मिल्ने अवस्था छ की छैन ?
केही दिनभित्र अलि ठूलो भोल्युममा परीक्षण हुँदैछ भन्ने सुनेको छु । त्यसले कस्तो नतिजा दिन्छ त्यसलाई पनि कुर्नुपर्‍यो । केही भेटिएन या संक्रमण देखिएन भने त्यति धेरै डराउनुपर्ने अवस्था त नरहला । तर, त्यसो भन्दैमा ढुक्क भएर लकडाउन नै हटाउने वा खुकुलो पारिहाल्न चाँही मिल्दैन । अहिलेलाई चाँही रिपोर्ट कस्तो आउँछ त्यसलाई कुर्नुपर्छ । अनिमात्रै भन्न सकिन्छ ।
परीक्षणका लागि कीटदेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्योपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ?
तत्कालका लागि त लगभग पुगअपुग नै हुन्छ होला । तर, अबको २ हप्तापछि अलि धेरै परीक्षण गर्नुपर्ने हुनसक्ने भएकोले यसको अभाव खड्कने देखिन्छ ।
आजको भोलि नै अरु देशमा जस्तै गरी नेपालमा अवस्था भयावह देखियो भने के गर्ने ? सरकारले गरिरहेको अहिलेको तयारी कत्तिको पुग अपुग छ ?
हो त्यो सम्भावना छ । त्यस्तै अवस्था आयो भने के गर्ने भन्ने विषयमा नै म अहिले तालिम दिँदैछु । तपाईंले भन्नुभएको जस्तै यो सोचनीय विषय हो । यति तयारीले मात्रै पुग्दैन । हरेक जिल्लामा कसरी क्षमता बढाउने भन्ने कुरमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । म लगायत केही साथीहरुले यो विषयमा तयारी गरिरहेका छौँ । यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिएर काम गर्नुपर्ने हो । तर, उहाँहरु यस्ता विषयमा अलि ढिलो तात्नुहुन्छ । हाम्रो देशमा मात्रै हैन शक्तिशाली देशहरुमा पनि तयारी कमजोर रहेको कुरा त पुष्टि नै भैसक्यो नी हैन ?
डा. अनुप सुवेदीclose